» “ओलीले ‘मदन भण्डारीको श्रीमती भन्न हुने हो कि होइन’ भनेपछि… “ओलीले ‘मदन भण्डारीको श्रीमती भन्न हुने हो कि होइन’ भनेपछि… – हाम्रो खबर
“ओलीले ‘मदन भण्डारीको श्रीमती भन्न हुने हो कि होइन’ भनेपछि…
“काठमाडौं । मंगलबार मदन मण्डारीको जीवन पुस्तक श्वेतशार्दुल विमोचन कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारीबारे धेरै कुरा बोले । कार्यक्रमा मन्तव्य राख्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले मदन भण्डारीको विचारदेखि संविधानमा मदन भण्डारीले पुर्याएको योगदानबारे आफ्ना थुप्रै धारणा राखे ।”
“मन्तव्यका बीचमा ‘अब मदन भण्डारीको श्रीमती भन्न हुने हो कि होइन त्यो त थाहा छैन’ भनेर ओलीले केही ठट्टा पनि गरे । ३३ प्रतिशत महिलाको हकमा मदन भण्डारीकै पहलमा आएको भन्ने सन्दर्भमा ओलीले यस्तो ठट्टा गरेका थिए । ‘अब मदन भण्डारीको श्रीमती भन्न हुने हो कि होइन त्यो त थाहा छैन’ भनेर अध्यक्ष ओलीले भन्दा कार्यक्रमम दर्शकदिर्घा हाँसेका थिए ।”
“मदन भण्डारीकै नेतृत्वमा २०४६ सालको जनआन्दोलन पनि सफल भएको उनले बताए । कांग्रेससँग मिलेर जनआन्दोलनको प्रारुप मदन भण्डारीकै नेतृत्वमा भएको पनि ओलीले विगतलाई सम्झिए ।”
“ओलीले कार्यक्रममा, राखेका जस्ताको तस्तै छोटो, मन्तव्य :”
२०४७ कात्तिक २३ गते संविधान जारी भयो । त्यत्तिबेला खुलामञ्चमा मदन भण्डारीले बोल्दा २७ वटा आफ्ना टिप्पणीहरु यो यो कुराहरु संविधानमा कमी छ राख्नुपर्छ भनेर राख्नुभयो । त्यो कुरा २०६३ साल जेठ ४ गते आइपुग्दा ती कुराहरुलाई पुर्नस्थापित संसदले महशुस गर्न बाध्य भयो । र, ती कुराहरुलाई पारित गरिनुपर्छ भनियो ।”
“मदन भण्डारीका एउटा सुखद संयोग पनि छन् । सामाजिक अधिकार, न्याय समानता र महिलासम्बन्धी प्रश्नहरुलाई..(त्यसपछि केही रोकिएर) अब मदन भण्डारीको श्रीमती भन्न हुने हो कि होइन त्यो त थाहा छैन । तर, एउटा संयोग के हो भने विद्या भण्डारीजी जो मदन भण्डारीको श्रीमती पनि हुनुहुन्छ । ”
“उहाँले नै पुर्नस्थापित संसदमा ४ वटामा बुँदमा पेश गर्नुभयो, सर्वदलीय सहमती जुटाएर । र, ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता, महिलाहरुको अन्य पक्षहरु, अंश, वंश आदिका कुराहरु जस्ता कुराहरु उहाँ (मदन भण्डारी) कै नेतृत्वमा अघि बढाइएको थियो । जस्ले पछि संविधानमा स्थान पायो र अहिले समानताको आधारमा अघि बढ्दैछौँ ।”
“मदन भण्डारी सही विचार निर्माण गर्ने । उक्त विचारलाई लेखन र मौखिक ढंगले प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो । मदन भण्डारीले बुझेको नेपाली समाजको स्थिती के हो ? यसलाई कसरी अघि बढाउनुपर्छ, पूराना शब्दावली घोकेर, रटेर तिनको पुनरोक्ति गरेर, तिनको उच्चाहरण र उद्धरण गरेर परिवर्तन हुँदैन । परिवर्तन मौलिक ढंगले हुन्छ । आफ्नो परिस्थितीअनुकूल हुन्छ । कहिलेकाहीँ योचाहीँ परिवर्तन गर्छाै भनेर आउँछन् त्यो बेतुकको कुरा हो । विचार दिन्छु भनेर दिइने होइन । व्यवहारका क्रममा परिस्थितीले निर्धारण गर्छ । यदि हामीले परिस्थितीलाई हामीले ठीक ढंगले विश्लेषण गर्न सक्यौ, चिर्न सक्यौ, समस्या चिन्न र समाधान गर्न सक्यौ भने नयाँ विचारहरु आउने हुन् ।”
“नयाँ विचार केही निकालौ न हैँ भनेर यसो घोत्लिएर कविता लेख्ने हो र ! नयाँ विचार भन्या । त्यो सजिलो कुरा होइन । एउटा युगले माग गरिरहेको हुन्छ र त्यो मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो मात्र विचार होस् । त्यसैगरी जननेता मदन भण्डारीले त्यहीँबाटोबाट अघि बढ्दै जाँदा जनताको बहुदलीय जनवादको विचार प्रतिपादन गर्नुभयो । मेरा मित्र मदनजि मभन्दा पाको हुनुहुन्छ, उमेरमा । उहाँको कुरामा कुनै असहमति जनाउन इच्छा छैन तर पनि कम्युनिष्टहरु पावर केन्द्रित गर्छन् भन्नेमा अलिकति असहमतिचाहिँ जनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।”
“कम्युनिष्टहरु दमनकारी हुन्छन् त्यसकारण फाटो भन्ने हुन्छ विचार पछौटेपन, आत्मस्वार्थमा केन्द्रित तर, देश र जनताप्रति केन्द्रित नहुने कुराबाट प्रकट हुन्छ । नेपाली कांग्रेभित्रबाट २००७ सालमा एक जना व्यक्तिल दुई पद लिनुहुन्न भन्ने आवाज निस्कन्छ । मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र सभापति भएपछि एउटा हुनुपर्छ भन्ने जोड्दार माग उठ्यो । जसको अगुवाई वीपी कोइरालाले गरिरहनुभएको थियो । पछि वीपी प्रधानमन्त्री र सभापति हुनुभयो । उहाँले नेतृत्व एउटै व्यक्तिले गर्नुपर्छ नत्र कन्ट्राडिक्सन हुन्छ भन्नुभयो । त्यसैले यो राजनीतिक कहिले उता, कहिले यता फर्किन्छ । तर, मेरो विचार यता र उता फर्किनुहुन्न । पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्छ ।”
हामी अतिथी लोकतन्त्रावादी होइन, रैथाने लोकतन्त्रवादी हौँ । नेपाली कांग्रेसले कम सेक्रिपाइस गरेको छैन भन्दिन तर, कांग्रेसको गरेको सेक्रिफाइसचाहीँ सेक्रिफाइस हुने, हामीले गरेको सेक्रिफाइस केही नहुने भन्ने हुँदैन”